Gabdhihii Chibok oo maqan muddo shan sano ah - BBC News Somali
Gabdhihii Chibok oo maqan muddo shan sano ah
Lahaanshaha sawirka Getty Images/AFP
Maanta waxaa muddo shan sano ah laga joogaa markii 276 gabdhood oo iskuulay ah laga afduubtay magaalada Chibok ee waqooyi bari ee dalka Nigeria.
Ururka Boko Xaraam ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerrarkaasi.
Waxaa weli la la'yahay 112 ka mid 276-dii gabdhihii iskuulayda Chibok ee la afduubtay.
Bayaan uu soo saaray madaxweyne Muxamadu Buhaari ayaa waxaa lagu sheegay inuusan nasan doonin ilaa gabdhahaasi ay qoysaskooda kala midoobayaan. Afduubka gabdhahaasi ayaa lagu tilmaamay in uu ahaa hawlgalkii ugu weynaa ee ururka Boko Xaraam uu magac ku raadsanayay.
Boko Xaraam oo soo saartay Video
Waxaana afduubka gabdhahani Chibok ka dhashay olole caalami ah oo lagu doonayay in gabdhahaasi lagu sii daayo, waxaana hormuud ka ahaa shakhsiyaad caanka ka ah dunida sida xaaska madaxweynihii hore ee Mareykanka Michelle Obama.
60 gabdhood oo ka mid ah gandhahaasi la qafaashay ayay u suurtagashay in ay soo baxsadaan kooxdii afduubatay halka 104 kale la soo daayay.
Balse shan sano ka dib waxaan wali meelna lagu sheegi kari gabdhihii kale ee ku haray gacanta mintidiinta ururka Boko Xaraam.
Madaxweynaha Nigeria Maxamadu Buhari ayaa dhawr jeer sheegay in maamulkiisu ay ka go'an tahay sidii gabdhahaasi maqan loo heli lahaa.
Balse ilaa haatan ma cadda tirada dhabta ah ee gabdhaha ku jira gacanta kooxdii afduubatay iyo halka wali lagu hayo.
Qof goobjooge ah ayaa sheegay in qaar ka mid ah gabdhahaasi uu ku arkay dalka deriska ah ee Cameroon, waxaana sidoo kale soo baxayay caddeymo muujinaya in inta badan gabdhahaasi la guursaday oo ay carruur haystaan.
Weriye reer Nigeria ah oo xiriir la leh Boko Xaraam ayaa sheegay in 15 gabdhood oo kaliya ay ka nool yihiin 112-kii gabdhood ee wali la la'yahay, taa oo ka dhigan in intooda badan ay dhinteen.
Sanad ka ho ayaa afhayeen u hadlay dowladda Nigeria waxa uu BBC-da u sheegay in ay weli wadahadal kula jiraan Boko Xaraam, si loo soo daayo 112 gabdhood oo wali maqan, ayna ka niyad jabbi doonin arrintaasi.
Waxa uu intaasi ku daray inysan jirin sabab ay u aaminaan in qaar ka mid ah gabdhaha ay dhinteen.
Balse ilaa xilligaasi ma jiraan gabdho laga soo daayay ururkaasi mintidka ahi.
Horraantii bishii shanaad ee sanadkii 2017, ayaa ururkani wuxuu sii daayay 82 ka mid ah gabdhahaasi iskuulayda ahaa ee sanadkii 2014 laga afduubtay magaalada Chibok, waxaa lagu wareejiyay milateriga dalkaasi Nigeria.
Sii deyntan gabdhahani ayaa ka dhalatay wadaxaajood dhex maray dowladda Nigeria iyo ururka Boko Xaraam.
Gabdhahaasi ayaa gawaari looga soo qaaday deegaan go'doon ah, ka dibna la geeyay saldhig ciidan oo ku yaalla Banki oo u dhaw soohdinta ay Nigeria la leedahay Cameroon.
Bishii Oktoobar ee sanadkii 2015 ayaa waxaa wadahadal dheer ka dib ay Boko Xaraam soo daysay 21 gabdhood.
Bartamihii bishii Agoosto ee sandkii 2016 ayaa ururka Boko Xaraam waxa uu soo saaray muuqaal ay ku sheegayaan inuu yahay gabdhihii iskuuleyda ee ay ka afduubteen magaalada waqooyiga ku taal ee Chibok.
Muuqaalkani, ayaa lagu arkayay nin wajiga u xiran yahay oo hubeysan gadaalna ay ka taagan yihiin haween tiradoodu lagu qiyaasay ilaa konton. Dhowr ka mid ah haweenkaasi, ayaa u muuqday kuwa ilmada iska tirtiraya. Waxa ayna mid ka mid ah haysatay cunug yar.
Muuqaalka, waxa uu ku bilaabanayaa nin wajiga u duuban yahay oo qori sita. Ninka ayaa sheegaya in qaar ka mid ah gabdhaha ay dhaawacmeen oo ay qabaan dhaawacyo halis ah iyadoo 40 la guursaday.
Dowladda ayaa sheegtay inay la xiriirta xagjiriinta soo daayay muuqaalka video.